ပျက်အစဉ် ပြင်လျှင်ရ (Yangon Drainage) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပျက်အစဉ် ပြင်လျှင်ရ (Yangon Drainage)
ပျက်အစဉ် ပြင်လျှင်ရ (Yangon Drainage)
12.6.2014 ဒီနေ့ မနက် ၇နာရီမှာ သည်းသည်းမဲမဲရွာတဲ့ မိုးကြောင့် ရန်ကုန်မြို့နေရာတော်တော်များများ ရေကြီးသွားပါတယ်။
အခါတိုင်းကတော့ ဒီရေတက်တာနဲ့လည်း ရောနေပြီး ဒီရေခံနေတာကြောင့် မိုးရေတွေ မဆင်းနိုင်တာကလည်း အကြောင်းတခုဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီကနေ့ကတော့ ဒီရေကြောင့် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီရေတက်ရင် မြုပ်နေကျ လမ်းမတော်၊လသာမြို့နယ်တ၀ိုက်က ကမ်းနားလမ်းမှာ လုံးဝရေမတက်လို့ပါပဲ။
ဒါဆိုရင်တော့ အဖြေက ရေမြောင်းတွေပဲပေါ့။
ရန်ကုန်တမြို့လုံး တာမွေ၊ကမာရွတ်၊စမ်းချောင်းဗဟိုလမ်းတလျှောက်၊ပြည်လမ်းတံတားဖြူ အင်းယားကန်ရှေ့၊လှိုင်သာယာ တွေရေမြုပ်ကြတာ FB ကနေတဆင့်လည်းသိရ၊ကိုယ်လည်းဖြတ်ရင်းကြုံရတာလည်းရှိပါတယ်။ကြားမိသလောက် ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကတော့ သမိုင်းလမ်းဆုံပါပဲ။
အင်းစိန်လမ်းကနေ သမိုင်းလမ်းဆုံဖြတ်မရတဲ့ ကားတွေဟာ မင်းဓမ္မလမ်းကနေ ဖြတ်နေကြရတော့ ကားပင်လယ်ကြီးဖြစ်လို့။
(အဲဒီကနေ အေဒီလမ်းဒေါင့်မှာတောင် တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြသွားတာ ဓာတ်ပုံတွေ မြင်လိုက်ရတယ်)
ရေ၀င်တဲ့ ကားတွေလည်း ထိုးရပ်ကုန်ရော။
ကိုယ်မရောက်မိတဲ့ နေရာတွေအကြောင်းမသိပေမယ့် ကိုယ်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာထဲက ဥပမာတင်ပြီး ပြုပြင်စရာတွေ ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
ဒီတခါ သမိုင်းလမ်းဆုံ ရေကြီးတာ အရင်ထက်ဆိုးပါတယ်။
မိုးဦးမကျခင်က စည်ပင်က Backhoe အသေးလေးနဲ့ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း နဲ့ အပြိုင် မရမ်းချောင်းကို တူးတာ တွေ့လိုက်မိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မကြာခင် မိုးဦးကျစ မိုးနည်းနည်းရွာတာတောင် ရေလျှံတာတွေ့ရတော့ သဘောလောက် အလုပ်ပြသွားတာပဲလို့ သဘောပေါက်လိုက်မိတယ်။
အခုလို မိုးရေချိန်လည်းများ၊ဒီရေလည်း မတက်ရော စည်ပင်ရဲ့ အဖြစ်လုပ်ပြသွားတာ ဘွားဘွားကြီးပေါ်သွားပါတယ်။
ဒီ မရမ်းချောင်းကရေဟာ သမိုင်းလမ်းဆုံ နဲ့ ပါရမီလမ်း ကြားကနေစီးပြီး ဘုရင့်နောင် လမ်းမကြီးကိုဖြတ်တဲ့ ပိတောက်ချောင်းကနေတဆင့် ရန်ကုန်မြစ်ထဲ စီးဝင်ပါတယ်။
-ကန်ထရိုက်တိုက်တွေ ဆောက်ကြတဲ့အခါ ရေမြောင်းတွေကို ပေမီစံမီ အနက်အကျယ်မတူးတော့ပဲ လျှော့ကြတာတွေ ကြောင့်လည်း ရေမြောင်းပိတ်ကြရတယ်။
(တချို့များ ရေမြောင်းဧရိယာထဲ ခိုးပြီး အိမ်တိုင်ချ၊အပင်စိုက်၊တဖြည်းဖြည်းနယ်ချဲ့ယူတာရှိသေးတယ်။
-လူတွေ စည်းကမ်းမရှိ အမှိုက်ကို မြောင်းထဲချကြတာကြောင့်လည်း မြောင်းပိတ်ရတယ်။
-ရေဆိုးထွက်ရာ ကွင်းတွေကို ဖို့ပြီး ရောင်းစားတာတွေကြောင့်လည်း ရေမြောင်းပိတ်ရတယ်။
-သဘာဝအရ ရေမြောင်းထဲ အနည်ကျပြီး တဖြည်းဖြည်း ကောလာ တိမ်လာတာကြောင့်လည်း ရေမြောင်းပိတ်ရတယ်။
စည်ပင်က အမှိုက်ချတဲ့ ပြည်သူကို လက်ညှိုးထိုး၊
ပြည်သူက မြောင်းမရှင်းတဲ့ စည်ပင်ကို လက်ညှိုးထိုးနေကြရင်
ရေကြီးရင် ခဏ FB ပေါ်ဓာတ်ပုံတွေတင်ကြ၊အော်ကြ၊စိတ်ညစ်ကြ၊
(တချို့များ ရေကြီးရင် ဘောကွင်းတွေနဲ့ လှေလုပ်စီးပြီး ပျော်နေကြသေးတယ်။ဒီနေ့တောင် ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းပေါ်မှာ လမ်းလယ်ခေါင် နိုင်လွန် ဇကာတွေ ၀ါးဇကာတွေသုံးပြီး ရေစီးနဲ့ မျောလာတဲ့ ငါးတွေဖမ်းပြီး ပျော်နေကြတာ တွေ့သေးတယ်။) တကယ်တော့ ဒီရေတွေဟာ အိမ်သာတွေကို ဖြတ်ပြီး စီးလာတာ။
(မြောက်ဥက္ကလာ၊လှိုင်သာယာတို့မှာ ၀မ်းရောဂါ ဖြစ်နေတယ်လို့ သတင်းရထားတော့ ရောဂါ ပြန့်ပွားနှုန်းတော့ အမြန်ယာဉ်စီးတော့မှာပဲ လို့ တွေးမိသေး။)
နောက်နေ့ ရေကျသွားတော့ ဒို့သာကီဝင်လူမျိုးတွေ မေ့သွားကြပြန်ရော။
နောက်နှစ် မိုးတွင်းရောက်ရင် ဒီဒုက္ခကို ပြန်ရင်ဆိုင်ကြရပြန်ပါတယ်။
ပျက်တဲ့ အတိုင်းနေကြရင် အမြဲ ပျက်၊
ရောက်ရာနေရာကနေ သူ့ကြောင့် ငါ့ကြောင့် လက်ညှိုးမထိုးပဲ ပြုပြင်ကြရအောင်။
-ပြည်သူတွေဖက်က ရေမြောင်းတွေထဲ အမှိုက်ချတာ ရပ်တန်းက ရပ်ပေးကြပါ။
အချင်းချင်းလည်း လက်တို့ပြီး အမှိုက် မပစ်ဖို့ သတိပေးကြပါ။
-စည်ပင်ဖက်က ရေမြောင်းတွေကို ပြင်ပေးကြပါ။
လမ်းအကောင်းကြီးတွေပေါ်တောင် မလိုအပ်ပဲ ကွန်ကရစ်လမ်းထပ်ခင်းနေသေးတာပဲ၊
(စက်မှုဇုံလို စီးပွားရေးရပ်ကွက်တွေမှာတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ထိုက်သင့်သလို ပူးပေါင်းရမှာပါ။ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေ ရေထိ ဆုံးရှုံးတာ၊ရေကြီးတိုင်းရွှေ့ရပြောင်းရလို့ မလိုအပ်ပဲ အလုပ်သမားခတွေ ကုန်တာထက်စာရင် ရေမြောင်းပြင်တာကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီဦးစားပေးလုပ်သင့်ပါတယ်။ ရေမြောင်းရှင်းဖို့ လုပ်အားပေးဖို့လိုရင်လည်း ပြည်သူတွေက ဒါ စည်ပင်အလုပ်လို့ မတွက်ကပ်ပဲ ကိုယ်နိုင်သလောက် စိတ်ပါလက်ပါကူညီပေးကြဖို့ လိုပါတယ်)
စည်ပင်က ပြင်ရာမှာ လုပ်တယ်ဆိုရုံ အဖြစ်မလုပ်ပါစေနဲ့။
အနီးဆုံး စင်္ကာပူ မှာ ရေမြောင်းစနစ်ကောင်းတယ်လို့ ကြားမိတဲ့ အတွက် စင်္ကာပူက ချစ်မိတ်ဆွေလေးတွေဆီ တောင်းလိုက်တော့ သူတို့ဆီက ရေမြောင်းပုံတွေရလာပါတယ်။
(၁) ရေမြောင်း ဧရိယာ ကျယ်ကျယ်ရနိုင်တဲ့ နေရာမှာ ကျယ်ကျယ် လုပ်ပါတယ်။
ရေမြောင်း ဧရိယာ ကျဉ်းတဲ့နေရာတွေမှာ နက်နက် တူးထားပါတယ်။
(၂) ရေမြောင်းဘောင်တွေဟာ အမှိုက်မတင်နိုင်အောင် အလျှော(Slope)လုပ်ပေးထားပါတယ်။
(၃) ရေမြောင်းရဲ့ အလယ်မှာ မူလ မြောင်းထက် ပိုပြီး နက်တဲ့ မြောင်းအသေးလေး တခု ထပ်ပြီး လုပ်ထားပါတယ်။
ရေနည်းချိန်မှာ ရေနဲ့ အနည်တွေ အလွယ်တကူ စီးသွားနိုင်ဖို့လို့ နားလည်ထားပါတယ်။
(၄) ရေမြောင်းတလျှောက် လူတွေ အလွယ်တကူ အမှိုက်မပစ်အောင် ခြံစည်းရိုးကာထားတယ်။
(၅)ရေမြောင်းတွေဟာ ရေထွက်ပေါက်ဖက်ကို နက်သထက်နက်သွားရမယ်။ကျယ်သထက်ကျယ်သွားရပါမယ်။
(၆)မိုးရေချိန်ဘယ်လောက်ထိများနိုင်တယ်ဆိုတာ လေ့လာပြီး လုံလောက်တဲ့ ရေမြောင်းအနက်၊အကျယ်တည်ဆောက်ထားရပါမယ်။
နတ်ကွန်းရှိတဲ့ ညောင်ပင်တွေတွေ့ရင်လည်း တူးထုတ်ရပါမယ်။
တပ်မြေ၊နိုငံပိုင်မြေ၊အစိုးရပိုင်မြေ၊အစိုးရစက်ရုံမြေကစလို့ ရေစီးရေလာကောင်းဖို့ ပိတ်ဆို့နေတယ်ဆိုရင် ရဲရဲတင်းတင်း ဖေါက်ထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းမြေ၊ကိုယ်ပိုင်ဈေးဆိုင်၊ကိုယ်ပိုင်အိမ် တစွန်းတစ ပိတ်ဆို့နေရင်လည်း အများကောင်းဖို့အတွက် အနစ်နာခံပေးဖို့လိုပါတယ်။တအိမ်လုံး၊တကျောင်းလုံးရွှေ့ရတာမှမဟုတ်တာ။
(အင်းယားမြိုင်လမ်းနဲ့ အင်းယားလမ်းကြားဇေယျသိဒ္ဓိစာသင်တိုက်နားမှာ အရင်က လမ်းမပေါက်ခဲ့ပါဘူး။အခုဆို အဲဒီနားက မြေအနည်းငယ်ကို ပိုင်ရှင်ကလှူသလား၊အနီးအနားက၀ိုင်းဝယ်ပေးလိုက်ကြသလားတော့ မသိ၊လမ်းဖြစ်သွားပြီး အလွယ်တကူသွားနိုင်တာ သတိထားမိလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနေရာရဲ့ မြေဈေးဆို ခေါင်ခိုက်နေတာပါ၊ဒီလို အများသွားဖို့ လမ်းဖြစ်သွားတာ တကယ့်ကို အကျိုးများပါတယ်)
ပြည်သူတွေဖက်က စည်းကမ်းရှိရှိ အမှိုက်မချသလို စည်ပင်က ရေမြောင်းတွေ ပြုပြင်ပေးဖို့ ပြည်သူတွေက တွန်းအားပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီတွန်းအားက ဒို့အရေးအော်စရာမလိုသလို တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြဖို့လည်း မလိုပါဘူး။
– ပြည်သူ့တာဝန်= အမှိုက်မချဖို့ ၊
အချိန်မှန် အမှိုက်သိမ်းပေးဖို့ ဆိုပြီး စာတန်းချိတ်ကြရအောင်။
ခိုင်ဇာနဲ့ မယ်တိုးပို့တဲ့ စင်္ကာပူ ရေမြောင်းပုံတွေ ကြည့်ရင်း ဒါမျိုးမြင်ဖူးပါတယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်တော့ ….
စမ်းချောင်း မင်းလမ်းဘေးက ရေမြောင်းကြီးကို သတိရလိုက်တယ်။
အဲသလိုပဲ ဆယ်ပေလောက်အကျယ်မှာ အနက်ကြီး၊ဘေးကလည်း slope နဲ့၊အောက်ခြေထိတော့ မမြင်ဖူးတော့ ဘယ်လို လုပ်ထားတယ်မသိဘူး။
နောက်ပြီး ကန်တော်ကလေး မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းကရေမြောင်းကြီး၊
ကျုံးကြီးလမ်းလို့ နာမည်တွင်ရလောက်တဲ့ သရက်တောကျောင်းတိုက်နားက ရေမြောင်းကြီး၊
စင်္ကာပူက အားကျခဲ့ရတဲ့ မြို့တော်ရန်ကုန်မှာ အဲဒါတွေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခုတော့ သူတို့တွေ ရှိနေသေးပေမယ့် သူတို့ထဲရောက်အောင် စီး ၀င်မယ့် လမ်းကြောင်းတွေ ပိတ်တော့ သူတို့ မတိုင်ခင် ခရီးမှာပဲ ရေတွေ လျှံကုန်လို့ သူတို့လည်း အရာမရောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။
ပျက်တာကို ပြင်ချင်စိတ်ရှိဖို့က ပဓာနပါပဲ၊
ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏ(ပြင်လို့ရလည်းခဏလို့ စာရေးဆရာမ မစန္ဒာက သရော်ခဲ့ဖူးတယ်)
ပျက်အစဉ် ပြင်လျှင်ရ လို့ စကားပုံ ပြောင်းကြရအောင်။
ဒါက လော့ကျတဲ့အိမ်က.. ရေမြောင်း.. အဲ.. အယ်လ်အေမြစ်..။
ဖြစ်ပုံက.. အဲဒီထဲ.. ရုပ်ရှင်ခဏခဏရိုက်ကြတာပါ..။ အာနိုးကြီးရဲ့ တာမနိတ်တာထဲ.. ပြဒါးလူသားနဲ့ကားမောင်းပစ်ကြခတ်ကြတာလည်း.. အဲဒီမြောင်းပါပဲ..။
လွန်ခဲ့တဲ့.. ၅နှစ်လောက်ကစပြီး.. အယ်လ်အေမြို့ဖြတ်သွားတဲ့.. အယ်လ်အေမြစ်ကို.. အဆင့်မြှင့်ပြင်တာတွေ.. အစိုးရကထလုပ်ပါတယ်..။
သာမန်အားဖြင့်သိထားတာက.. မြစ်(မြောင်း)ဘေးနံရံတွေကို.. ၅ပေလောက်အမြင့်.. ထပ်မြင့်တာပါ..။
လမ်းတံတားတွေပါ.. လိုက်မြှင့်ရသမို့.. ဒေါ်လှဘီလီယန်ချီကုန်ပါတယ်..။
မလုပ်ရင်.. တချိန်ချိန်မှာ.. မြို့ကြီးပင်လယ်ရေအောက်ရောက်မယ်ဖြစ်ပါကြောင်း…/
လူတွေကတော့ လူတွေ ပေါ့လေ… သူတို့ က တပိုင်း…
စနစ်ကို လူက လုပ်တယ်ဆိုတော့…. လူကြောင့်ပဲ ဆိုဆို စနစ်ကြောင့်ပဲဆိုဆို…
ကျွန်တော်ကတော့ စည်ပင်ပဲ အပြစ်ချရမှာပဲ……
ကျွန်တော်တို့ လမ်းထိပ်မှာ အမှိုက်ပုံ တပုံရှိတယ်…. ပုံးလေး နှစ်ပုံးထားထားတယ်…
သူ့ ဘေးနားမှာ စားသောက်ဆိုင် နှစ်ဆိုင်ရှိတယ်….
အဲ့အမှိုက်ပုံက ထားတဲ့ပုံးနဲ့ မလောက်လို့ လျှံတောင်ထွက်နေတယ်…. ဘေးနားမှာ ပွစိကို တက်နေတာပဲ….
ညနေ ၈နာရီလောက်ဆို အမှိုက်ပုံနဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာ စားနေတဲ့သူနဲ့ က ကပ်လျက်….
သူတို့ ဘယ်လို စားသောက်နေလဲတော့ မသိဖူး… အနံ့ ကတော့တလှိုင်လှိုင်…
ဆိုချင်တာက… ပြည်သူတွေမှာ လိုက်နာလာတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်…. ဒါပေမယ့်… အဲ့ဒါကို စည်ပင်က မလိုက်နိုင်ဖူး…..
ခုနက ကိတ်စမျိုးဆို…. ဒါ ၀ယ်လိုအားများနေတာပဲ…
အဲ့ဒါမျိုးဆို ပုံးလေး နှစ်ပုံးအစား…. နောက်ထပ် လေးပုံးလောက်ဖြစ်ဖြစ်… အမှိုက်လည်းနဲ့ မြန်မြန်လာသယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် တခုခု လုပ်ပေးရမှာပေါ့… အခုဆို တနှစ်လောက်သာရှိမယ်… ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပဲ….
သွားမေးလိုက်ရင် ပိုက်ဆံက မရှိဖူး….. ဘာဖူး ညာဖူး…. စွပ်စွဲတယ်လို့ ပြောလည်း ခံရမှာပဲ…. အရင်းစစ်ရင် ခြစားနေတဲ့ဟာတွေပဲ လက်ညှိုးထိုးချင်တယ်……..
ကျွန်တော်လည်း မြို့ ထဲရောက် တခါတလေ လမ်းဘေး မုန့် ဝယ်စား အမှိုက်လေး ပစ်ချင်လို့ပုံးလိုက်ရှာရင် တွေ့ ဖူးခင်ဗျ….
နောက်ဆုံး သွားစရာလာစရာ ရှိတော့ မတက်နိုင်တဲ့အဆုံး… လမ်းဘေး ပစ်ချလိုက်ရတာပဲ…..
တခါတလေ တက်နိုင်ရင် အိမ်အထိ တောင်ပြန်သယ်သွားပေးတာပါပဲ….
စာရေးသူက မျှမျှ တတ ပြောသွားပေမယ့်….
စည်ပင်မှာ လုံးဝ လုံးဝ တာဝန် အပြည့်ှရှိတယ်……
ရေမြောင်းပုံကို သဂျီးရဲ့ လော့ကျတဲ့ဆီမှာရိုက်တဲ့ကားတွေထဲ မြင်ဖူးတယ်
ဒါပေမယ့် ရေမြောင်းလို့တောင် မထင်မိဘူးဗျ တကယ်။
အခုလည်း ရန်ကုန်မြို့ကြီး ရေပေါ်ရောက်တာ ရေမြောင်းကြောင့်ဆိုတာကို သိရဲ့နဲ့ ဘယ်ဘက်ကိုပြောရမလဲ ဆိုတာ တွေးတုန်း
ဒေါ်လေးပြောသလို စည်ပင်ကလည်း ဟန်ပြပဲလုပ်တာ လူတွေကလည်း လစ်ရင်လစ်သလို ပစ်နေတာပဲ (ကိုတိမ်မည်းပြောသလို စည်းကမ်းလိုက်နာလာတဲ့သူတွေ တစ်စထက်တစ်စ များလာပေမယ့် ကွာဟချက်ကတော့ အတော်များနေတုန်းပဲလေ)
ဆိုတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပြင်မှ ရမယ်ဗျ။ အခုလိုပုံနဲ့ဆိုရင် စည်းကမ်းလိုက်နာတဲ့သူတွေတောင် စိတ်ပျက်သွားမှာဆိုတော့
ကျနော့် လက်ညိုးကို စည်ပင်ဘက်ကို နည်းနည်း သာသာလေး ထိုးပါရစေခင်ဗျ
ခိုင်ဇာပို့တဲ့မြောင်းက Storm Water Collection Channel လို့ ခေါ်ပါတယ်…
ရွှေကြည်ပို့တဲ့ မြောင်းကတော့ Normal Drainage Line ပါ…
ရန်ကုန်မှာ ဖြစ်နေတာက Normal Drainage Line တွေက Slope Angle မမှန်…
ပြီးတော့ အမှိုက်တွေနဲ့ပိတ်ပြီး နုန်းပို့လို့ မြောင်းတွေက တိမ်…
Storm Water Collection Channel တွေက လူတွေ ကျူးကျော်မြေဖို့လို့ ကုန်ပြီဆိုတော့…
♫ ♫ လှေကလေးကို လှော်မည်… ဘေးမသန်းပဲ အေးချမ်းတော့သည် ♫ ♫
မယုံရင် ပုံပြင်လို့သာ မှတ်ယူကြပါခင်ဗျာ…
အင်္ဂလိပ်က ရန်ကုန်မြို့ပြစီမံကိန်း (Urbanization Plan) ဆွဲတော့ အဲဒါတွေ အကုန်ပါ ပါတယ်…
နောက်ပိုင်း မထိန်းသိမ်းနိုင်တော့ အဲသည့်မြောင်းကြီးတွေ အကုန် ကောသွားရော…
အဲ… ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ မြေအောက်မြောင်းတွေရဲ့ မြေပုံတွေ မီးလောင်ကုန်တာလည်း ပါသပေါ့…
အဆင်ပြေလို့ လက်ခုတ်တီးခဲ့ပါရစေ အစ်မရေ…။
မနေ့ကတစ်နေ့လုံး ယဉ်ကျောပိတ်ဆို့မှုနဲ့ နပမ်းလုံးနေခဲ့ရတော့
ရေမြောင်း ကိစ္စ ဘယ်သူများပြောမလဲ ပေါ့…။
-အချင်းချင်းလည်း လက်တို့ပြီး အမှိုက် မပစ်ဖို့ သတိပေးကြပါ။
ဆိုတဲ့ အထဲက ပထမ ၂ ချက်ကို လိုက်နာဖို့ ကြိုးစားပါမယ်ခင်ဗျ။
တတိယ အချက်က စည်ပင်က ကမကလ တွေကို ကြားအောင်အော်မှရမယ်ခင်ဗျ…။
ရေကြီးတဲ့အကြောင်း အာတီဒုံပြောတာနဲ့ တင်ပြည့်စုံနေတော့ ကျုပ်ထပ်မမွှန်းတော့ပါဘူး…အဲဒါနဲ့တဆက်တည်းဖြစ်တဲ့ ကားပိတ်မှုပဲပြောချင်တယ်…
ခုတလောကြုံတွေ့နေရပုံကြောင့် ရန်ကုန်ဟာ နေချင်စရာတောင်မကောင်းတော့ပါဘူး…
ရပ်ကုန်တော့တာပါပဲ…နောက်တစ်ချက်က မီးပွိုင့်တွေပါ..ပျက်နေပေမဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲရှိနေရင် သိပ်မဆိုးပါဘူး..ယာဉ်ထိန်းရဲမရှိလို့ကတော့ အတင်းလုတိုးကြရင်း ခေါင်းချင်းဆိုင်ကုန်ပြီး ပိတ်တော့တာပါပဲ……………………….
အဖြေကတော့ လွယ်ပါတယ်…ယာဉ်ထိန်းရဲ ဦးရေလုံလောက်အောင်ခန့်
လမ်းတိုင်းမှာ စည်းကမ်းမဲ့မောင်းသူတွေကို ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူ
မီးပွိုင့်တိုင်းမှာ ယာဉ်ထိန်းနှစ်ဦးစီ မဖြစ်မနေထား..
အဲ..ယဉ်ထိန်းရဲကိုလည်း လူရှိန်အောင် လက်နက်တတ်ဆင်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်…
(ခုတလော ယာဉ်ထိန်းရဲတွေကို ရန်ရှာတာတွေစိတ်လာပါတယ်)
“စည်းကမ်းပျက်ယာဉ်တွေနဲ့ လမ်းရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေ ရှိလာတဲ့အတွက် စည်းကမ်းအတိုင်း လုံခြုံရေးအရကာကွယ်ဖို့အတွက်၊ ပြန်ခုခံဖို့အတွက် ခြောက်လုံးပြူးသေနတ်တွေကို ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပေးဖို့ စီစဉ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ တခြားမလိုလားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေ ထပ်မံ မဖြစ်ပွားစေဖို့အတွက် အထက်က ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြန်လည်ခုခံဖို့အတွက် ရဲအုပ်အဆင့်ကနေ အထက်အရာရှိအဆင့်တွေအထိကို ရော်ဘာတုတ်နဲ့ ကျဉ်စက်ကို ကိုင်ခွင့်ပေးမယ်။
ဒုရဲအုပ်အဆင့်ကနေ အခြားအဆင့်တွေအကုန်လုံးကို ရော်ဘာတုတ် ကိုင်ခွင့်ပေးသွားပါမယ်”ဟု ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး ကျော်ထွေး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
– See more at: http://news-eleven.com/local/%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%82%95%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%AD-%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%B4%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%90%E1%80%B9-%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%B9-%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BD-%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7#sthash.ayQLYUQF.dpuf
ဆိုတော့..အဲ့လိုမှ အင်နဲ့အားနဲ့ စည်းကမ်းထိန်းမပေးနိုင်ရင်….နောက်ဆို ခြေလျှင်လျောက်ရုံးတက်၊
ကိုယ်သိတာလေး ၁ ခု / ၂ ခု လောက်တော့ ဝင်ရွှီးပါရစေနော် ။
မြောင်း တစ်ခုတည်း က အဓိက မကျလှပါဘူး ခမျ ။
သြဇီ မှာတော့ ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ ( အိမ်ခြေ ၄ / ၅၀၀ လောက် ရှိတဲ့နေရာတိုင်းပေါ့ ) ၊
Storm Water Basin ( မိုးရေတွေ လျှံတက်လာရမဲ့ / မိုးရေစုတဲ့ နေရာ ) တွေ ရှိသဗျ ။
အဲဒီနေရာတွေနှင့် မြေပေါ် / မြေအောက် ရေမြောင်းတွေနှင့် အကုန် ဆက်ထားသပေါ့ဗျာ ။
အဲဒီတော့ ၊ မုန်တိုင်းဖြစ်လို့ မိုး ၄ / ၅ ရက် ဆက်တိုက်ရွာရင် ၊
အဲဒီ မိုးရေစုတဲ့ နေရာ တွေမှာ ၊ ရေတွေပြည့်ပြီး ကန်ကြီးလို ဖြစ်နေသပေါ့ ။
အဲ ၊ ဒါပေမယ့် ၊ လူနေအိမ် ၊ ကားလမ်း တွေဖက်ကို ရေ မတက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ ။
ရန်ကုန်မြစ်မှာ ၊ ဒီရေ ( လဆန်း လဆုတ် ၃ ရက် ခေါင်ရေ ) တက်ရင် ၊
ဒီရေ မျက်နှာပြင်ထိပ်က ကမ်းနားလမ်းတွေရဲ့ မျက်နှာပြင် နှင့် Level လောက် ရှိသဗျ ။
အဲဒီ ကိစ္စကတော့ ၊ မြေပြင်ကို မြှင့်တင်မလား ။ မြစ် ကို တာဘောင် ခတ် မလား ။
ဒါမှ မဟုတ် ရန်ကုန်မြစ်မှာ ရေတံခါး တပ်မလား တစ်နည်းနည်း နှင့် ရှင်းမှ ရ မဗျ ။
နောက်တစ်ခုက ၊ သတိထားမိတာက ၊ ရန်ကုန်မြစ် ၊ လှိုင်မြစ် အစရှိသဖြင့်ကို ၊
ရေစီး ရေလာကောင်းအောင် ၊ ရေနက်အောင် ၊ သောင်တူးပေးရမဗျ ။
အခုက မြစ်တွေက တိမ်လာတော့ ရေနဲနဲတက်ချင်ပြီ ဆိုတာနှင့် ၊
မြစ်ကမ်းပါး ဘေးနေရာတွေကို ရေတွေလျှံတက်လာတော့တာဘဲ ။
ဒီရေ ခေါင်ရေ နှင့်ပါ ကြုံလိုက်တော့ ၊ ပိုဆိုးသပေါ့ဗျာ ။
( လူ တစ်ရပ်ကျော် နက်တဲ့ ) မြေအောက် မြောင်းကြီးတွေ ၊
( Under Ground Drainage Line ) တွေလဲ ရှိသင့်တယ်ဗျ ။
အဲဒလို မဟုတ်ဘဲ ၊ အခု က ရေချိုးခန်း ၊ မီးဖိုချောင် သုံးပြီးတဲ့ရေတွေကို ၊
အိမ်ရှေ့ လမ်းဘေး ရေမြောင်းထဲကိုဘဲ တိုက်ရိုက် စွန့်ပစ်နေကြတော့ ၊
အဲဒီ ရေမြောင်းထဲမှာ ၊ မြောင်းပုပ်စော် နံ နေတယ် ခမျ ။
( ဒီဖက် နိုင်ငံတွေက လမ်းဘေး ရေမြောင်းထဲကို မိုးရေဘဲ သွားတာခမျ )
အဘလဲ သြဇီ မှာ တစ်နှစ်လောက်နေပြီး ၊ ပြန်လာခါစဆို အဲဒီ မြောင်းပုပ်နံ့ ရသဗျ ။
မြန်မာပြည်မှာ အနေကြာသွားပြန်ရင်တော့လည်း ၊ နှာခေါင်း ယဉ်သွားပြန်ရော၊ ဟီ ဟိ ။
အင်းးးးးးး ၊ နောက်ဆုံး ခြုံပြောရရင်တော့ ၊
အဲဒဟာတွေ အကုန်လုံး လုပ်ဖို့အတွက်က ၊ ပိုက်ဆံ လိုနေတာပါဘဲဗျာ ။
မြန်မာပြည်လို ၊ ကမ္ဘာပါတ်ပြီး ပိုက်ဆံ ချေး / တောင်းနေရတဲ့ ၊
ဖွတ်တို့၏ ဘိုးအေ ၊ ငမွဲ ထိပ်ခေါင်တင် ၊ နိုင်ငံကြီးမှာ ၊
သိပ် အများကြီး မ မျှော်လင့်တာဘဲ ကောင်းပါတယ် ။
အဲဒီတော့ ၊ လှေကလေးကို လှော်မည် ။
ဘေးမသန်းဘဲ အေးချမ်းတော့မည် ။ ဟီ ဟိ ။
ဘက်ဂျက်မရှိပဲ ဘာမှလုပ်မရဆိုတာကို.. မြန်မာတွေလက်ခံယူလာဖို့သင့်တယ်..
အခုက.. ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်..စနစ်မဟုတ်..။ နိုင်ငံတွေက မိုးပေါ်ကကျလာမယ့်ငွေတွေနဲ့.. မပြင်ပေးနိုင်..။
မြို့နေလူထုကို.. မြို့နေ. အခွန်ကောက်သင့်တယ်..။
အိမ်.. မြေ.. လုပ်ငန်းတွေကို.. လုပ်ထုံးနည်းတွေတိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီး.. မလိုက်နာသူတွေကို.. ဒဏ်ကြေးတွေကို.. ရက်ရက်စက်စက်ချသင့်တယ်..။
မြေအိမ်တွေကို.. ပိုင်ဆိုင်အခွန် property tax နှစ်စဉ်တိုးကောက်သင့်တယ်..။
ရတဲ့အခွန်ငွေတွေကို.. အတိအကျစာရင်းစစ်ထားပြီး ထုတ်ပြန်သင့်တယ်..။
အော် ပို.စ်ထဲမှာ ထည့်ရေး စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ရင်တောင် မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေဆိုပြီး ဆက်မတွေးရဲလောက်အောင်ပဲ…
ကိုကိုစည်ပင်များကတော့ တာဝန်ကျေချက် ၉လောက်ရှိတယ်.. မြောင်းဆည်ကြပါပြီ.. မြောင်းဆည်မဲလုပ်သားက လေးငါးယောက်… ယူနီဖောင်း အသစ်ဂျက်ဂျွတ်တွေဝတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်၊ကား.. ရုံးကား အကုန်နဲ. အယောက်နှစ်ဆယ်လောက် ချီးတက်လာပြီး… မြောင်းဆယ်တဲ့ လေးငါးယောက်ဘေး လက်ညှိုးထိုး…. ဓာတ်ပုံရိုက်… ပြီးရင် မြောင်းဘေးနားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အကုန်စုထိုင် စားသောက်ပြီးတော့ အလျှို လျှို ထပြန်သွားကြတာ… မြောင်းဆည်တဲ့ လေးငါးယောက်တောင် နှစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်.. မျောလာတဲ့ အမှိုက်လေးတွေကို ဒုတ်နဲထိုးနေတာ…. ဟေ့ဟေ့ ကိုယ်တွေ.ကိုယ်တွေ…
အဲဒီတော့ကား….. သင်ကောင်းလျှင် ကျွန်ုပ်မဆိုးပါဆိုသလို…
စည်ပင်ကောင်းလျှင် ကျွန်ုပ် အမှိုက်မပစ်ပါ… ပဲ ပြောရတော့မပေါ့ဗျာ…. ကျုပ်တို.ပြည်သူတွေ စည်းကမ်းမရှိဘူး ဗျာ.. မရှိတဲ့သူကို ဘာလို.စည်းကမ်းရှိအောင် မလုပ်နိုင်တာလဲမသိ…. ကျုပ်တို.နိုင်ငံက ခြောက်ရင် ကြောက်တတ်ပါတယ်… ဒီနေရာ မှာ ခြောက်ကြပါလားကွယ်ရို… ကြောက်လိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း… ဟင်းဟင်း..
တော်ပါပြီမပြောတော့ပါဘူး.. ခလေး ခလေးနေရာနေတာပဲကောင်းတယ်… ငင့်
အမှိုက်ကား မလာတာ ၂ပါတ် ရှိပီ
တလောကတော့ ဗားဂရာဂျောက်ထဲ လမ်းပေါ်ရေမတင်ရခြင်းအကြောင်း ဆင်းလေ့လာနေကြတယ်ဆိုလားပဲ.. အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဖောက်ထားတဲ့နေရာဆိုတော့ နှစ်တွေကြာလှပေါ့.. မတတ်ရင်လည်း အကူအညီတွေယူကြပါတော့လားနော်… လူတွေဒုက္ခရောက်တာကိုကြည့်ပျော်နေလားမသိ…
လူတွေလည်း စည်းကမ်းမရှိ… စည်ပင်လည်း အမှိုက်မသိမ်း… အခွန်ကတော့ သုံးလတစ်ကြိမ် စာရွက် ၃ရွက်လောက်နဲ့ပုံမှန်လာသား.. တိုးပေးရမယ်ဆိုလည်း ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် တိုးပေးနိုင်ပါတယ်.. :((
စနစ်ကြောင့် လို့ပဲ အော်ချင်တယ်။
အမှိုက်ကို စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အမှိုက်ပုံးတွေ ချထားပေးဖို့ လိုတယ်။
အချိန်မှန် အမှိုက်သိမ်းဖို့ လိုတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က မနက် ၅နာရီလောက် ဘုရင့်နောင်ကုန်းကျော်တံတားပေါ်မှာ ညစ်ပတ်နေတာတွေ့လို့ ဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့် ဘာတွေများ ကျသွားပါလိမ့်လို့ ကြည့်လိုက်တော့မှ…..
အမှိုက်သိမ်းကာနေ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ကျဲဖြန့်သွားတဲ့အမှိုက်တွေ ဖြစ်နေပါရောလား။
(အမှိုက်သိမ်းကားကနေ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ကျဲဖြန့်သွားတဲ့အမှိုက်တွေ ဖြစ်နေပါရောလား။ )
မြောင်း မပြင်ရင် နေပါ .. အဲ့ဒီ့ အကြောင်းရေးဖို့ Red link အမြန်ပြင်ရင်ဘဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောမလို့ပါ .. အိမ်မှာလဲ သုံးမရ ။ ရုံးမှာလည်း နှေးတချက် မလာတစ်ချက် .. MPT ပြောင်းလိုက် ဟိုပြောင်းလိုက် ဒီပြောင်းလိုက်နဲ့ .. မဆီ မဆိုင် အတင်းဆိုင်လိုက်ကြောင်းပါ …
နောက်ထပ် ဆိုင်မဆိုင်သေခြာ မသိပေမဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ထင်တာ … အခုမင်းရဲကျော်စွာ ကားပွဲစား ကားကွင်းကို ပြောင်းမလို့ လုပ်နေတဲ့ ကွင်း ။ ပန်းခြံကျောင်းလမ်း က အရင် မီးလောင်သွားတဲ့ ကွင်းက အနိမ့် ။ စီးလာတဲ့ ရေတွေအဲ့ဒီ့ထဲ ၀င်အိုင်နေကျ ။ပန်းခြံ လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဒီနှစ် မြေတွေ နွေမှာ အပြင်းအထန်ဖို့ပါတယ် ။ အလယ်မှာ ရေကန် သေးသေးလေး တစ်ခု ချန်ပါတယ် …အဲ့ဒီ့ ကနေ အခုတော့ ကား ပွဲစားတန်း ပြောင်းမယ်ဆိုပြီး ကွန်ကရစ်တွေ ခင်းနေပါတယ် .. အခု မိုးလည်း ရွာရော တစ်ခါမှ မမြင်ဘူးတဲ့ ဓမ္မသုခကျောင်းလမ်းလည်း ရေတွေတက် ၊ အဲ့ဒီ့ ရှေ့တည့်တည့် ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမှာလဲ ရေတွေ လွှမ်းဆိုတော့ .. သိဝူးရယ် ..ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့ဒီ့ ကွင်း လက်ညိူးထိုးချင်တာရယ် .. ဆက်ဆွဲရရင် အဲ့ဒီနေရာ မေလကုန်ပြောင်းမယ်တာ ပြောထဲ့လိုက်တယ် .. ကွင်းက မြေဖို့ ယုံ ဖို့ထားတာ ။ ကြိတ်ထားတယ် ဆိုတာ မရှိသလောက် ။ပန်းခြံလုပ်မယ် ပြောထားတာကိုး ။အဲ့ဒါကို အခုမှ ကမန်းကတန်း ကွန်ကရစ်လောင်းနေတော့ ဘယ်လောက်ခံမယ်လည်း မသိ ။ အဲ့ဒီ့ ကွင်း ၀င်တဲ့ လမ်းနှစ်လမ်းလုံးကလည်း ခပ်ကျပ်ကျပ် ။ ကားနှစ်စီး တစ်ပြိုင်နက် မောင်းဖို့မလွယ် ။ အဲ့ဒါကို ကားပွဲစားတန်းလုပ်ဦးမယ်ဆိုတော့ စည်းကမ်းတွေ အလုပ်တွေ ခဏဖယ်လိုက်ပြီးပြောရရင် လက်တန်းလုပ်တဲ့ အစီအစဉ်မရှိတဲ့ ကြုံ ရာကျဘမ်း ပညာရှိတွေ ဘေးဖယ်ထားပြီးလုပ်နေမှတော့ အန်တီဒုံရေ .. ဘာမှ မပူ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ မမှီတော့ပါဘူး …..
မြို့တည်မယ် ဆိုရင် အဲဒီ ရေနုတ်မြောင်း စံနစ်က ကျကျနနဖြစ်အောင် အရင် လုပ်ရတာ ဆိုပဲ။
အနော့ရဲ့ ရေလာမြောင်းပေး စံနစ်တွေကို လာဖြန့်ဝေအူးမှပါ။
ဒါပေမဲ့ civil engineer တွေ ဖြေရှင်းလို့ မရပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ civil engineer တွေ အထက်မှာ စစ်ရေးအမြင် ရှိပြီး စွယ်စုံတတ်သိ အဘ တွေ က လမ်းတခြမ်းခင်း ပေါ်လစီတွေ၊ ဂွမ်ဖင် ပေါ်လစီ တွေနဲ့ ဘဲ လုပ်လေ့ရှိတယ်။
လူနေ သိပ်သည်း ထူထပ်တဲ့ မြို့လည်ခေါင်မှာ အိမ်သာတွေက ထွက်လာတဲ့ အညစ်အကြေးတွေ စနစ် တကျ စီးဆင်း မသွားနိုင်ဘူး ဆိုရင်၊ sanitation system မရှိဘဲ နယ်မြို့လေးတွေကလို အိမ်သာကျင်းတွေ တူးထားရတယ် ဆိုရင် အခုလို ရေ ဒူးခေါင်းလောက်ထိ တက်တာနဲ့ septic tank ထဲက အတုံးအတုံးလေးတွေ ရေထဲ မျောလာနိုင်တဲ့ အလားအလား ရှိနေတယ်။
အဲဒါကြောင့် နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ပွားချင်တာကတော့ နောက် ၅ နှစ် နဲ့ ၁၀ နှစ် အတွင်းမှာ Civil Engineering ဘယ်လောက် အရေးပါတယ် ဆိုတာ ရန်ကုန် မြို့ သူ မြို့သား များက ကိုယ်တွေ့ ခံစားပြီး ပြောပြ ကြပါလိမ့်မယ်လို့…
ရေဆိုးစုတဲ့ နေရာကွက်လပ်တွေ ချန်ပေးထားရတဲ့ အကြောင်း ကိုပေါက်ရဲ့ မန္တလေး ပို့စ်တွေမှာ ဖတ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။
တက်သိမ်းအင်းကို ဖို့လိုက်တဲ့အတွက် မန္တလေး ရေမြုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ။
တပ်ပိုင်မြေ မကျူးကျော်ရ ဆိုင်းဘုတ်တင်သလို
ရပ်ကွက်ကလည်း ရပ်ကွက်ပြည်သူပိုင်မြေ မကျူးကျော်ရ ဆိုင်းဘုတ်တင်ကြမှပဲ။
2014 ဇွန် ၁၂ ရက် နံနက်ပိုင်း ရွာသွန်းခဲ့သောမိုးကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ နေရာအနှံ့ ရေကြီးမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းအတွက်ကြောင့် နောင်အလားတူကိစ္စရပ်များ လျော့နည်းသွားစေရန် စီမံချက်များရေးဆွဲနေကြောင်း၊
မိုးရွာသွန်းသည့် မိုးရေချိန် အချက်အလက်များ၊ ရေထွက်ပေါက်စသည့် အချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်ကာ စီမံချက် ချမှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့်
မြစ်ထွက်ပေါက် ၃ဝ ကျော်ကို ရှင်းလင်းနေကြောင်း
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ လမ်းနှင့်တံတားဌာနမှ သိရသည်။
လူမနိုင် လေနိုင်ရမယ် ဆိုတာ အစိုးရ လား ဟင် ……………………..
စကားအတင်းစပ် .. အင်းယားမြိုင်နဲ့ အင်းယားလမ်း မဟုတ်ဘူးထင်ပါသည် အန်တီဒုံ .. သူတို့ ကြား သံလွင်လမ်း ခံနေပါတယ် ။။
ကျွန်တော် ထင်တာ မမှားရင် အန်တီဒုံပြောတာ အင်းယားမြိုင် ကုန်းတက်နားကသံလွင်လမ်းကို ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းက ဖြတ်ဝင်တဲ့ ဖြတ်လမ်းလား မသိ ။ ဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ ဟိုးနှစ်လေးဆယ်လောက်ကထဲ ကရှိကြောင်းပါ ။ ခုလိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။
အဲဒီက၀င်သွားရင် ဗောဓိလို့ခေါ်သလားလို့။အခု RV Centerဖွင့်ထားတာကိုဖြတ်၊ဇေယျသိဒ္ဓိစာသင်တိုက်ဆိုတာ ဆရာလေးကျောင်းလို့ နာမည်ကြီးတယ်လေ။(အရင်က အဲဒီနေရာ သချိင်္ုင်းမြေတဲ့။အဲဒီဆရာလေးကျောင်း အလွန်လေးကနေ အနီးဆုံးပဏ္ဍိတာရာမ ရွှေတောင်ကုန်းကျောင်းရှိတဲ့လမ်းကို ဖြတ်တဲ့နေရာမှာ အရင် ၁၀နှစ်ကျော်က ကားသွားလို့မရခဲ့ဘူး။အခု ကား၂စီးရှောင်လို့ရတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီး အင်းယားမြိုင်လမ်းကို ပေါက်အောင်သွားလို့ရသွားတယ်။
ပဏ္ဍိတာရာမ ရွှေတောင်ကုန်းကျောင်းဟိုဖက် Art Gallery တွေရှိတဲ့နားမှာလည်း လမ်းသွယ်တခုတော့ရှိတယ်။ဒါပေမယ့် လမ်းမဖြောင့်ပဲ ကျောင်းရှေ့လမ်းကျဉ်းလေးပဲပေါက်တာ။
အဲဒီ သထိန်းရပ်ကွက်အကြောင်းပြောလို့ အမြင်ကပ်နေကြပါအုံးမယ်။
တကယ်က အနားမသီနိုင်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ရိပ်သာတွေ အလှူသွားစားတာပါ။
ဆောရီးပါ အန်တီဒုံ ။ ကျွန်တော်ပထမ ပြောတဲ့ နေရာတော့မဟုတ်ဘူး ။ ကျွန်တော့်မှာ ရှိတဲ့ မြေပုံ အရလဲ အင်းယားလမ်းနဲ့ အင်းယားမြိုင်ပေါက်တဲ့လမ်းမရှိဘူး ။
အန်တီဒုံပြောပုံ အရဆို အင်းယားလမ်းကို ဓမ္မစေတီလမ်း ဘက်ကနေလာရင် သစ်သီးတန်း မရောက်ခင် ညာဘက် ချိူးတက် သွားရတဲ့ လမ်းက ဗောဓိကုန်း၊ ဗောဓိရိပ်သာလမ်း ။ အဲ့ဒီ့ ကနေမှ သံလွင်လမ်းကို ပြန်ဝင်သွားပြီး ဗီယက်နမ် သံရုံးရှိတဲ့အောင်တော်မှုစေတီ လမ်း ကနေအင်းယားမြိုင်ကို ပြန်ဖြတ်တာ ထင်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့လမ်းကတော့ ဟုတ်တယ် ။ အရင် ကားသွားလို့ မရဘူး ။နောက်ပိုင်းမှ သွားလို့ ရတာ။
ပိုစ်နဲ့မဆိုင်တာ ပြောမိတာ ဆောရီးပါအန်တီ ..
ဒီမိုးဒီရေနဲ့တော့ ဒီတမိုးစိတ်ညစ်ရအုံးမှာပဲအန်တီဒုံရေ။ ရေမြောင်းအကြောင်းပြောရရင်တော့ ပြော မဆုံးပေါင်တော သုံးတောင်ဖြစ်တော့မှာပဲ။ မြင်နေရတယ် သူတို့ ( စည်ပင် ) ရေမြောင်းတွေကို ဘယ်လို တန်ဖိုးမထားလဲဆိုတာ။ ရေမြောင်းဆိုတာ အလကားမြေပုတ်တယ်လုိ့ထင်နေတဲ့သူတွေ စည်ပင်ဆိုတာ ကြီးမှာ လူကြီးတက်ဖြစ်နေမှတော့ ကုန်ပြီပေါ့အန်တီဒုံရယ်။ ခေါင်းမပါတဲ့သူတွေဆိုတာ သူတို့မှအစစ်
အမှနတော့ ‌မေယာ ‌ရွေး‌ကောက်ပွဲ လုပ် မှ ဒါ‌တွေ အထိုက်အ‌လျောက် တိုးတက်လာမှာပါ
မြို့တော်ဝန်ဆိုတာ လူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရတဲ့ ရာထူးပါ။
သူ့မှာ မြို့နေလူထု ကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးရမယ့် တာဝန်ရှိပါတယ်။
ကျုပ်ရဲ့ သွေးသောက် ညီအစ်မ နှစ်ယောက် တက်ညီလက်ညီ ပါလား။
ဒီမှာလဲ ဖေဖဝါရီလထဲ တုန်းက မိုးကြီးပြီး ရေလျှံလိုက်တာ နှစ် ၁၀၀မက မှာ အဆိုးဝါးဆုံးတဲ့။
တိုက်ဆိုင်တာက လပြည့်ခါနီး ချိန်မှာ ပိုပို ဆိုးတာဘဲ။
ဒီရေတက်ချိန် နဲ့ တိုက်တာလဲ ပါတယ်။
ဒီမှာတော့ အစိုးရ ကို တရားဝင် ဆဲ ကြပါတယ်။
တကယ်တော့ အစိုးရထက် Environment Agency လို့ ခေါ်တဲ့ ဌာန ကို ပေါ့။
သဘာဝ ကြောင့်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ က ကြိုတင်ကာကွယ်ထားပေးရမဲ့ တာဝန်ရှိတာလေ။
ဒီအတွက် သူတို့ ကို တာဝန်ပေးခန့်ထားတာ မဟုတ်လား။
မြန်မာပြည်မှာလဲ တာဝန်ဘယ်သူ့ ကိုပေးထား ဘယ်သူတွေ က ဒီတာဝန်အတွက် လစာ ခံစားနေလဲ ပြတ်ပြတ်သားသား သိမှဖြစ်မယ်။
မသိရင် မရှိ ရင် မမ Post မှာ ပြောသလို ရွာ ထဲက လူတွေ ကို တာဝန် ပေးပလိုက်မယ်။
ရွာထဲ မှာ စည်ပင်ဝံကြီး ရ စေသတည်း။
(ခု မနက်တော့ ဘဖောရှယ်တာတွေ့မိလို့ )
ဒီပို့(စ) အောက်မှာ ထားချင်တာ လာထားလိုက်တယ်။
“ကျွန်တော်စစ်ဆေးတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံက ရေမြောင်း”
မြောင်းဖုံးမပါတဲ့ ပုံထဲက ရေမြောင်းတွေကို စစ်ဆေး ဓါတ်ပုံရိုက် တင်ပြရပါတယ်။
ရေမြောင်းဆိုတာ ရေစီးဘို့ သက်သက်ဖြစ်ပါသတဲ့။ရေကန် လုံးဝ မဖြစ်စေရပါဘူးတဲ့။
မိုးရွာတုန်း ခနမှာဘဲ ရေရှိရပါတယ်။မိုးတိတ်သွားလို့ ရေမြောင်းထဲမှာ
ရေတင်မကျန်ရပါဘူး။ရေမြောင်းထဲမှာ ရေ၀ပ်နေယင် ခြင်ပေါက်ဖွားမှာ စိုးလို့ပါ။
ခုပုံတွေ အားလုံးဟာ နေရာစုံက အဖုံးမပါတဲ့ ရေမြောင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ရေစီးရေလာ ကောင်းအောင် ရေမြောင်းတည်ဆောက်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေ
ဘယ်လို ကြိုးစား အားထုတ်ရတယ် ထင်ပါသလဲ???
အင်ဂျင်နီယာ အထက်က လူကြီးတွေကလည်း စစ်တပ်က ဗိုလ်တွေ မဟုတ်ကြပါ။
အော်ဟစ် ဆဲဆိုသံမကြားရပါ။ဖားစရာ မလိုပါ။လက်ဘက်ရည် တိုက်စရာ မလိုပါ။
ခိုင်းတဲ့ သူတွေ ကလည်း တိုင်းပြည်ချစ်ကြောင်း မပြောဘူးပါ။ထိုက်တန်တဲ့ လစာငွေရလို့
လုပ်တယ်ဘဲကြားဘူးပါသည်။ကွာလတီကောင်းကောင်းလုပ်ပြီး ငွေရှာဘို့ကို စိတ်အားသန်ကြသည်။
တည်ဆောက်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာ အတော်များများက မြန်မာပြည်က ဌာနစုံက အကြောင်း အမျိုးမျိုးနဲ့ ကန်ထုတ်ခံရတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေပါ။မိဝေး ဘဝေးနဲ့ ဒီလို ကွာလတီကောင်းအောင် ဘာကြောင့်
လုပ်နိုင်ရတာပါလဲ????အမိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာကြောင့် ဒီလို မဖြစ်တာလဲ???
မိုးများတဲ့ အမိ မြန်မာပြည်ကြီးမှာလည်း ရေစီးတဲ့ ရေမြောင်းတွေကို များများ တည်ဆောက်
နိုင်ပါစေ ၊ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုလည်း ရေလွှမ်းတဲ့ ဘေးက ကင်းဝေးပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့အထက်မှာလည်း နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင်ကြီးတွေ
ကြီးစိုးနိုင်ပါစေ။ပညာရှင်တွေရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို ပညာတတ်တွေဘဲ ကြီးစိုးတဲ့
ဟုတ်တယ်ဗျ.. ကျွန်တော်က ဗားဂရာနားမှာ နေတာပါ.. ထူးဆနုးစွာ ရေမကြီးပါ.. ပြီးတော့ မြောင်းတွေကလဲ တိမ်တိမ်လေးတွေ ဘာကွာလဲတော့ မသိဘူး.. တကယ်တော့ လမ်းမကြီးရဲ့အောက်မှာ မြစ်ထိသွားတဲ့ မြောင်း အကြီး တခုရှိပါတယ်.. အဲဒါက အပေါ်ကစီးသမျှရေတွေကို မြောင်းကြီးထဲဆင်း.. အဲဒီမြောင်းကြီးက မြစ်ထဲ တန်းဆင်းတာဗျ.. ဒါကြောင့်ပါ.. မြေအောက်မြောင်းကြီးတွေ ကောင်းလို့ပါ… နောက်ထပ်ထူးဆန်းတာတော့ ရှိသေးတယ်.. မြစ်နဲ့ ဆက်ထားတော့ မြစ်ရေတက်တော့လဲ ရေမကြီးပြန်ဘူး.. တာမွေနတ်ချောင်းဆို လပြည့်ဆို အော်တို ရေကြီးတယ်.. ဘာကွာလဲတော့ မသိ.. ဒါပေမဲ့ ဗားဂရာချောက် ရေမကြီးတာတော့ ခုနက ဟာတွေကြောင့်ပါ.. ကျွန်တော့် တသက်နီးပါးနေခဲ့တဲ့ နေရာလေး… ဟဲ..